Miblaogy mikasika ny Vaovao Farany araka ny fomba Afrikana Tatsimo · Global Voices teny Malagasy
Miblaogy mikasika ny Vaovao Farany araka ny fomba Afrikana Tatsimo
Voadika ny 14 Oktobra 2018 4:01 GMT
Raha toa ka manakaiky ny Andro Iraisam-pirenena natokana ho an'ny SIDA amin'ny voalohan'ny volana Desambra isika, niteraka resabe iray hafa indray ilay minisitry ny Fahasalamana miteraka adihevitra be sy malaza ratsy ao Afrika Atsimo, i Manto Tshabalala- Msimang. Fantatra izy amin'ny anarana hoe ”Dr.Tongolo Gasy” noho ny fiarovany ny tongolo gasy, ny ranom-boasary ary ny menaka oliva tato ho ato ho toy ny vahaolana ho an'ireo olona mararin'ny SIDA, raha toa ka tokony hanome fanafody manohitra ny firongatry ny viriosy izay tena ilain'izy ireo, lasa resaka mahaliana ireo haino aman-jery izany, miampanga ilay governemanta mpanavakavaka taloha ho tomponandraikitra amin'ilay areti-mifindra VIH/SIDA ao Afrika Atsimo. Manana ilay tantara i Jonty ao amin'ny The Fishbowl:
Efa nisy foana ireo ( izaho koa anisany) izay niampanga ny fanavakavahana ho tomponandraikitra amin'ireo olana ara-tsosialy ratsy indrindra ao Afrika Atsimo, saingy lavitry ny fototr'izany mihitsy ny fanambaran'i Manto hoe ”ny governemantan'ny fanavakavahana no tomponandraikitra tamin'ny fanaparitahana haingana ny SIDA tao Afrika Atsimo” …Manasongadina kokoa ny toe-tsaina ”manafina loha anaty fasika” ananan'i Manto ny fiampangana ny fitondrana mpanavakavaka eto. Teo ambanin'ny governemanan'i Mandela ny firongatry ny SIDA (indrisy) ary, na dia namantsika ny fototr'ity fitomboana be ity aza fy fiandohan'ny andian-taona 90, nisy fiantraikany teo amin'ny politikan'ny fahasalamana nandritra ny ankamaroan'izany fotoana izany ny governemanta tetezamita fampiraisam-pirenena. Manamarina i Rina Venter, ny Antoko Nasionaly izay minisitry ny fahasalamana tamin'izany fa nisy nidiran'i Manto manokana ny fandrafetana ny politika fiadiana tamin'ny SIDA teny am-piandohan'ny andian-taona 90.
Nanana vintana be i Dr Tongolo Gasy tamin'ny fahafahany nisoroka jery maro be tsy ho amin'ny hadisoana vitany farany teo, satria, toy ny mahazatra, ny tantaran'ilay filoha afrikana tatsimo taloha izay monina ao Afrika Atsimo, i Jacob Zuma no nibodo ny lohateny lehiben'ny haino aman-jery toy ny isanandro, ary indrindra nandritra ireo herinandro vitsivitsy lasa. Tsy vitan'ny hoe voampanga ho nanao kolikoly fotsiny i Jacob Zuma, fa fanampin'ireo antambony, nampangaina ho nanolana ihany koa izy anehitriny. Nomena ny Sampandraharaha Nasionaly amin'ny Fitsarana omaly ny taratasy momba azy, izay hanapa-kevitra raha tokony hampiakarina fitsarana noho ny fanolanana izy na tsia. Nangatahana taminy ihany koa ny ràny mba hanaovana fitiliana ADN mba hijerena raha mitovy amin'ny tsirinaina hita eo amin'ny kilaotin'ilay lazaina fa niharam-boina. Manadihady ny fiantraikan'ity fivoarana farany ity amin'ny fanohanana eny ifotony an'i Zuma avy amin'ny Cosatu (ny Kaongresin'ny Firaisan'ny Sendikà Afrikana Tatsimo) sy ny antoko kaominista i Fodder:
Olan'ny COSATU dia ny maha-fanapahan-kevitra tsy mitombina manaraka lalantsina politika ny fanohanany an'i Zuma ary avy eo naka ny ainy mihitsy aza izany. Indrisy, tsy safidy tsara indrindra ho azy ireo i Zuma ho ana mpitarika mpiasa ary tsimoramora, hitan'izy ireo izany, fa efa lasa lavitra loatra amin'izay làlana izay izy ireo ka tsy afaka ny tsy ho sarotra ny fisarahana ary hiafara ho toy ny adala sy mety halemy no fahitàna azy ireo.
Toerana fonenana ho anà vondrompiarahamonina Miozolomanina somary maro ihany ary tena mifikitra amin'ny ady eo amin'Israely sy i Paletsina i Afrika Atsimo. Mampiantrano vondrompiarahamonina jiosy izay tena mifikitra be amin'ny ady ao Afovoany Atsinanana ihany koa izy. Lohahevitra rakofana be any amin'ny haino aman-jery any amin'ny gazety afrikana tatsimo ny politikan'ny Afovoany Atsinanana mikasika an'i Israely sy ireo faritra Palestiniana ary matetika koa loahevitra anaty adihevitra mafàna any anatin'ny onjam-peo, toa tsy afaky ny hifankahazo na hahita teboka iombonana ireo vondrona roa ireo. Nahita ny toerany tao amin'ny tontolon'ny blaogy afrikana tatsimo ilay fanontaniana, indrindra niaraka tamin'ny blaogy roa, ny iray manoratra fomba fijery mpomba an'i Israely ary ny iray hafa kosa fomba fijery mpomba an'i Palestina. Tanjon'i Steve ao amin'ny It's Almost Supernatural ny hanasongadina ny heveriny ho fitongilanan'ireo haino aman-jery ho amin'ireo Palestiniana. Ao amin'ny lahatsoratra nosoratany farany, miblaogy mikasika ny Profesora Solomon Hussein, Afrikana Tatsimo Miozolomanina iray mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay vao haingana no nitsidika ny tao Afovoany Atsinanana, namita iraka fanadihadiana ny zavamisy:
Vao haingana no nitsidika an'i Israely sy faritra Palestiniana i Solomon tao anatin'ny sehatry ny iraka fanadihadiana ny zavamisy mba hamotopotorana ilay fifandirana. Ny fehiny? Tsy mahatakatra ilay fifandirana ny ankamaroan'ireo Afrikana Tatsimo Miozolomana ary ny farany ambony dia ny fahatakarana tsotra momba izany. Sarotra ny famintinana avy amin'i Solomon ary azo antoka fa hiatrika fanehoankevitra avy amin'ny vondrompiarahamonina Afrikana Tatsimo Miozolomana izy…
Manasongadina izay toa tsapany fa fikarakarana feno herisetra be ataon'ireo Israeliana an'ireo Palestiniana i Muhammad ao amin'ny “The Front Line” . Manopy maso eo amin'ilay fihetsiketsehana vao haingana nataon'ireo ankizy Palestianana mpianatra eny an-tsekoly izy:
”Ny fitaovam-piadiana mahery indrindra eo am-pelatanan'ireo mpanao famoretana dia ny sain'ireo voaporitra” – Steve Biko
…Afaka maka ny taninay ianareo, fa tsy hahazo anay mihitsy… tsy handresy mihitsy ianareo… tsy hatory am-piadanana raha toa ka mbola veona eo anatin'ny anaranareo izao tsy rariny izao.
Farany, manainga fanontaniana mahaliana mikasika ilay antsoina be hoe elitisma Mainty ao Afrika Atsimo i Trudi ao amin'ny The Hope Flower:
…Ny fitsarana avy amin'ny havia dia ny hoe nandray anjara tamin'ny famoronana ‘elita mainty mpitsentsitra’ i Mbeki… Mihevitra aho fa mpitsentsitra efa hatrany am-boalohany ny elita fotsy. Ankehitriny, tsy mazava ny zavatra eritreretin'ny havia momba ny ‘meritocratie’ (fanjakan'ny mendrika) sy ny fahatsaràna, fa heveriko fa nanadihady tsara ny olan'ny elita izy ireo. Tohina amin'ny zava-misy aho hoe toa tsy maintsy heverina ho mpihaza avokoa ireo elita rehetra any amin'ny tontolo andalam-pandrosoana, raha toa ka heverina ho manana fototra vitsivitsy kosa ho an'ny fahombiazana ny elitan'ny tandrefana …